राजनीतिप्रति कलाकारहरुको आक्रोस, कसले के भने ? (भिडियो रिपोर्ट) « Lokpath
२०७७, २२ पुष बुधबार १४:४९
राजनीतिप्रति कलाकारहरुको आक्रोस, कसले के भने ? (भिडियो रिपोर्ट)
प्रकाशित मिति : २०७७, २२ पुष बुधबार १४:४९
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु दुई खेमामा विभाजित भएपछि देश पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । यतिवेला नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ट नेता माधव नेपाल समूहले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, छेडछाड र हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै जाडो मौसममा पनि नेपालको राजनीतिक माहोल एकाएक तातिएको हो । अहिले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चरणबद्धरुपमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली समूहले नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा भेला कार्यहरु आयोजना गरिरहेका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरु पनि आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
‘पोलिटिक्स इज नथिङ बट एभ्रिथिङ’ भने झैँ तातिएको राजनैतिक रन्कोले यतिवेला सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । विश्वभर महामारीकोरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण नहुँदै देखिएको राजनैतिक संक्रमणले देशलाई पुनः अस्तव्यस्त बनाउने हो कि भन्ने त्रास जनमानसमा देखिएको छ ।
पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई कलाकर्मीहरुले पनि विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् । कसले के भने त ? प्रस्तुत छ, यसै विषयमा तयार पारिएको भिडियो रिपोर्ट ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओ भर्‍यो कि पर्‍यो, यस्तो छ वित्तीय अवस्था (भिडियो)
काठमाडौँ- नेपाली सेयरबजारको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साधारण सेयर अर्थात् (आइपीओ) आजबाट निस्काशन भएको
रचना रिमालको नयाँ गीत ‘भागुम मायालु’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । युवा लोक तथा दोहोरी गायक वसन्त विश्वकर्माले नयाँ गीत भागुम मायालु
अन्तर्राष्ट्रिय गायन प्रतियोगिता ‘हल अफ फेम’को प्रशारण शुक्रवारबाट
काठमाडौं । गायन प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रम ‘हल अफ फेम’को सिजन २ आगामी आज
पृथ्वीमा कति सुन बाँकी छ ? जूनमा पनि सुन ! (भिडियो)
काठमाडौं । सुनका अनेक फाइदा छन् । पहिलो त, यसलाई सुरक्षित लगानीका रुपमा